ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum ) ကျင်းပမည်။ - Myanmar Network
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum ) ကျင်းပမည်။
Posted by chomarwin on June 14, 2013 at 18:23 in Civil Society Development Activities
အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာဖြင့် အံ့မခန်းတိုးတက်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာ.ရွာခေတ် ကြီးတွင် နောက်ကျမကျန်ရစ်စေရန် အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားနေသည့် တိုင်းပြည်အသီးသီး၏ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ နည်းပညာ စသည်. နယ်ပယ် အသီးသီး၌ နိုင်ငံအတွက် တိုးတက်မူ အရှိန်အဟုန်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည့် လူငယ်များသည် အဖိုးတန် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း လူငယ်တို့ဧ။် လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးရန်၊ လူငယ်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော အခွင့်အရေးများ ရရှိလာစေရန်၊ လူငယ်များ၏ အခက်အခဲများ၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မူများ၊ အကြံဥာဏ်များကို ဆွေးနွေးနှီးနှော ဖလှယ်ပြီး လူငယ်များ၏ ပါဝင်မူကို အသိအမှတ်ပြုရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum) ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကျင်းပသွားနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
Yangon Youth Forum ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ -
(က) လူငယ့်အခွင့်အရေး၊ လူငယ့်အသံတို့ကို တစ်နေရာတည်း၌ စုစည်း ဖော်ထုတ်လာနိုင်စေရန်
(ခ) လူငယ်အချင်းချင်း ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်၍၊ လူငယ်များ တွေ့ကြုံနေရသည့် လူမှု အခြေစိုက် ပြဿနာများ (community issues) များကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် အကြံပြု ဆွေးနွေးသွားရန်
(ဂ) မြန်မာ့လူငယ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (Myanmar Youth Civil Society) များ ပိုမို အားကောင်းလာစေရန်
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Myanmar Youth Forum) တက်ရောက်ရန် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကိုယ်စားပြုသော လူငယ် ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်နိုင်ရန်
လူငယ်တို့၏ တွဲလက်နှင့် စည်းလုံးမူကို သက်သေပြနိုင်တော့မည့် လူငယ်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကြီးကို ကျင်းပပြုလုပ်ရန် Yangon Youth Forum 2012 တွင် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသူများနှင့် လူငယ်များမှ စတင် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုင်ရာ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ (Yangon Youth Forum – YYF) ကျင်းပရေးအတွက် ပထမအကြိမ် လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေးကို ပြည်လမ်း၊ ဒိုင်းမွန်းကွန်ဒိုရှိ ဂေဟဟိတခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ ပြီး တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၂၉) ယောက် ရှိခဲ့ပါသည်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်လာသော လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Yangon Youth Forum ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကို လည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတွင် -
(က) ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေး (Finance)
YYF ကျင်းပရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်များကို ပူးပေါင်းတိုင်ပင်ပြီး၊ လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအသုံးစရိတ်၊စာရင်းဇယားများကို ရှာဖွေတင်ပြရသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
(ခ) မီဒီယာနှင့် လူထုဆက်ဆံရေး (Public Relations)
Yangon Youth Forum အတွက် သတင်းကြေငြာချက်၊ သတင်း၊ မီဒီယာ၊ ပြင်ပဆက်ဆံရေး၊ ပြန်ကြားရေး၊ လှုပ်ရှားမှုသတင်းမျှဝေရေး၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပနိုင်ရေး စသည်တို့ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖော်ပြလုပ်ဆောင်ပေးရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။
(ဂ) အစီအစဉ်ညှိနှိုင်းရေးဆွဲရေး (Program Coordination)
Yangon Youth Forum အတွက် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲညှိနှိုင်းခြင်း၊ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ရေးတို့ကို ကော်မတီများနှင့်ညှိနှိုင်းကာ အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သော တာဝန်ရှိသူများ၊ resource person များနှင့် ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
(ဃ) ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ရေး (Networking & Communications)
Yangon Youth Forum ကို တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ခရိုင် (၄) ခုမှ လူငယ်အသင်းအဖွဲ့များ၊ အခြားသောလူငယ်များဖြင့် စုစည်းချိတ်ဆက်ပေးရသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
(င) ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး (Logistics)
Yangon Youth Forum အတွက် လိုအပ်သည့် အခမ်းအနားနေရာငှားရမ်းခြင်း၊ အစားအသောက် စီစဉ်ခြင်း၊သွားလာရေး စီစဉ်ခြင်း စသည့် အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်ရသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
(စ) အုပ်ချုပ်ရေး (Administration)
Yangon Youth Forum အတွက် လုပ်ဆောင်မှုများကို တရားဝင်အတည်ပြုပေးခြင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့များအား checkand balance ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းရေးသားခြင်း စသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်ရသည့် အဖွဲ့ -စသည့် ကော်မတီ (၆)ရပ် ထပ်မံခွဲခြား ပြီး Yangon Youth Forum အား ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင် ကျင်းပနိုင်ရန် တက်ကြွစွာဖြင့် စီစဉ်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
Yangon Youth Forum ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့်ဆောင်ရွက် ကြမည့် လူငယ်စွမ်းဆောင်ရှင် များနှင့် သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများတွင် ပါဝင်အားဖြည့်ကာ စိတ်ဝင်တစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် လိုသော လူငယ်များကို နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်လူငယ်တွေ.ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြန် ကြားရေးကော်မတီ
Permalink Reply by Pyae Phyo Aung on June 14, 2013 at 20:14
ဘယ်သူ မဆိုတက်ရောက်ခွင့်ရှိလား.ဒါမှ မဟုတ် Member ၀င်ထားတဲ့သူတွေပဲလား...
Permalink Reply by chomarwin on June 17, 2013 at 18:24
Media Team will announce the Participant's criteria on Myanmar Network Page. Thanks for your interest.
Permalink Reply by Thet Htar Shwe Oo on June 14, 2013 at 20:20
Permalink Reply by chomarwin on June 17, 2013 at 18:29
You can contact to yyfmedia@gmail.com and our facebook page (http://www.facebook.com/YangonYouthForum).
Permalink Reply by Aye Aye Mar on June 15, 2013 at 9:45
How do I participate in this organization? Where can I submit my name to becomeamember of this organization?
Permalink Reply by chomarwin on June 17, 2013 at 18:34
Media Team will post the new about participating as committee members in Yangon Youth Forum Page soon.
You can contact to yyfmedia@gmail.com and our facebook page (http://www.facebook.com/YangonYouthForum).Thanks for your interest .
Permalink Reply by Olivert(Tun AuNg KyaW) on June 15, 2013 at 12:33
Permalink Reply by chomarwin on June 17, 2013 at 18:37
Permalink Reply by Hlaing Myo Thu on June 17, 2013 at 18:19
I am interested in this.So how could I join with this. Could you please advise me?I am looking forward to your reply.